उसको देशप्रेम र म – A mélange, as LIFE is
उसलाई यहि चिन्ता हुन्छ –
यसरी कहिले देश बन्छ ?
ऊ फलाकिरहन्छ एक्लै –
देश छोड्नेजति सब नामर्द हुन्
भेडा चराउनै विदेश जानुपर्छ ?
खेत खन्न, दाउरा चिर्न यता पाइदैन र ?
भाँडा माझ्न विदेशनै जानुपर्छ ?
उसको आक्रोश देश छोड्नेहरुप्रति मात्र हो
यसरी कहिल्यै देश बन्छ ?
उसलाई यहि चिन्ता हुन्छ
हरेक साँझ –
“भट्टीपसल छिरेको एक घण्टापछि”
लौ न सरकार
म ऊ जस्तै देशभक्त बनूँ .. ?
वा उसले भनेजस्तै नालायक ??